IPhone Security | IPhone News (Pejy 2)
Afaka mampiasa iPhone ianao izao hiteraka lakilen'ny fiarovana ao amin'ny Google
Ny iPhone izao dia azo ampiasaina hamoahana lakile fiarovana amin'ny Google. Manokatra ny iPhone amin'ny Face ID ianao ary mandefa ny OK amin'ny alàlan'ny Bluetooth amin'ny solosaina.
Eve dia manolotra fakan-tsarimihetsika fiarovana an-trano vaovao HomeKit
Eve System dia nanolotra ny Eve Cam, fakan-tsary fiarovana HomeKit Secure vaovao
Mahavita mamitaka ny fanekena ny seranam-piaramanidina izy ireo, fa tsy ny Apple ID Face
Vitan'izy ireo ny mamitaka ny fanekena ny seranam-piaramanidina sy ny fivarotana any Shina, fa tsy ny Apple Face ID an'ny iPhone X
Apple dia mandray fepetra henjana hisorohana ny fanarahana ny Internet
Apple dia mandray fepetra henjana hisorohana ny fanarahana ny Internet. Ny fitsidihana an'i Safari dia ho azo antoka kokoa noho ny fepetra noraisin'ny ekipa WebKit
Ny faharefoana manan-danja amin'ny WhatsApp dia mamela ny fidirana mpitsikilo amin'ny iPhone
Ny lesoka lehibe iray amin'ny fiarovana amin'ny fampiharana WhatsApp dia mamela ny spyware hiditra amin'ireo fitaovana iOS sy Android
Miaraka amin'ny famoahana ny iOS 12.1.4, miasa indray ny antso an'ny Group FaceTime
Apple dia namerina niantso ny horonan-tsarimihetsika vondrona tamin'ny alàlan'ny FaceTime, raha vantany vao namoaka ny fanavaozana ny iOS izay mamaha izany olana izany izy.
Voamarina: tsy afaka mampiasa GrayKey intsony ny polisy hanalana iPhones aorian'ny famoahana ny iOS 12
Ireo tovolahy avy ao Forbes dia manamafy fa tokony ho voasakanan'ny Apple ny fidirana amin'ny USB an'ny iPhone, ka nanakana ny fiasan'ny fitaovana GrayKey.
Ahoana no hahalalanao raha simba-drano ny iPhone na iPod-nao
Nanomboka tamin'ny 2006, ny iPhones sy ny iPod rehetra dia manana tondro mifandraika amin'ny Liquid, na LCI. Ary eto avelanay anao ny toerana misy ireo tondro ireo amin'ny maodely tsirairay
GrayKey, ity no fitaovana afaka manambara ny teny miafinao iPhone
Ny sarin'ilay fitaovana afaka nahazo ny kaody famohana ho an'ny iPhone na iPad dia nihanazava. GrayKey no anarany
Fianakaviana Apple, fizarana misy toro-hevitra ho an'ny ray aman-dreny sy fampiasana fifehezana ny ray aman-dreny
Apple Family dia faritra vaovao ao amin'ny tranokala Apple izay hizarana toro-hevitra ho an'ny ray aman-dreny sy hanazavana ny safidy rehetra momba ny fifehezana ny ray aman-dreny ao amin'ny iOS.
$ 15.39 ho an'ny Apple ID amin'ny Internet Dark
Miharihary ny fivarotana kara-panondro (carte de crédit, kaonty banky, Netflix, PayPal, pasipaoro, ...). Ny tanjona faratampon'ny injeniera sosialy dia ny fahazoana vaovao ary avy eo amidiny. Raha tsy nivarotra izany izy ireo na nahazo tombony tamin'izany, dia tsy hisy dikany izany.
Manampy anay hamantatra ireo mailaka ara-dalàna anananao i Apple ary hisoroka ny fisoratanay
Apple dia nanavao ny tranokala anglisy izay manampy antsika hamantatra ireo mailaka manandrana maka tahaka azy. Ny tranokala Espaniola dia mbola mihetsika, saingy tsy mbola nohavaozina. Izy io dia fanampiana fohy izay ampiarahan'ity tranonkala Apple hafa ity amin'ny scam amin'ny alàlan'ny mailaka, antso na fampandrenesana diso.
Hanasazy ny mpamily i Frantsa noho ny mikasika ny finday avo lenta ao anaty fiara na hijanona aza ny motera
Ary eto no misy zavatra betsaka holazaina amin'ny CarPlay ... Ao amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina dia reraka ny mpitondra mahita mpamily ...
Apple dia manamafy fa ny famoahana ny kaody loharano iBoot an'ny iOS 9, dia tsy misy fiatraikany amin'ny fiarovana ireo fitaovana
Araka ny nohamafisin'ny Apple tamin'ny fomba ofisialy, ny fivoahan'ny kaody boot 9 iOS XNUMX dia tsy miteraka risika amin'ny fiarovana ny kinova farany an'ny iOS.
Raha mampihena ny fiarovana ny Face ID isika dia ho haingana kokoa ny fanidiana
Face ID no fomba azo antoka indrindra hamohana ny iPhone X. Na izany aza, manana dingana fanampiny izy io izay mety hahatonga azy hiadana ho an'ny mpampiasa.
Raha miahiahy momba ny fiarovana anao sy ny fiainanao manokana ianao, Bitdefender Mobile Security ho an'ny iOS no famenon-javatra tonga lafatra sy solon'ny iCloud amin'ny iPhone sy iPad anao.
Ring dia mamoaka rafitra fiarovana mifandraika amin'ny iPhone
Ring dia mamoaka vokatra vaovao izay mikendry ny hamongotra ny fomba fifandraisantsika sy hiarovana ny tranontsika amin'ny finday.
Famerenana ny PowerBank an'i Aukey, bateria 20000mAH mahery
Notsapainay ny Aukey Powerbank amin'ny alàlan'ny 20000mah, banky herinaratra tonga lafatra ahafahanay maka vola amin'ny tariby misy anay.
Nahazo isa fiarovana tsara ny tranokalan'ny kaontinao Apple
Ny tranonkala mitantana ny kaontinao Apple dia mahazo isa tsara amin'ny resaka fiarovana arakaraka ny fandalinana nataon'i Dashlane
Ny fampiharana malaza indrindra koa dia tsy azo antoka
Enina amby fitopolo amin'ireo rindranasa malaza indrindra izay hitantsika ao amin'ny iOS App Store no tsy dia voaaro loatra
Bug mamela ny fidirana amin'ny sary amin'ny iPhone na dia mihidy aza
Nisy bibikely vaovao nipoitra izay mamela ny fidirana amin'ny sary amin'ny iPhone na dia miaro azy amin'ny teny miafina na Touch ID aza isika.
Antivirus ho an'ny iPhone, mamakafaka izahay raha angano na zava-misy izany
Handinika ny fomba fijerin'ny antivirus ho an'ny iPhone izahay, ohatrinona ny angano sy ny zava-misy milaza fa tsy mila filaminana ny iPhone.
Ahoana ny fomba hampijanonana ny spam momba ny sary zaraina amin'ny iCloud sy ny Kalandrie
Tao anatin'izay herinandro lasa izay, ireo mpampiasa iCloud dia nahatsikaritra ny fitomboan'ny haben'ny spam azony. Ny…
Ahoana no ahafahan'i Apple manala ireo laces fiarovana avy amin'ireo iPhones
Apple dia nanao izay hahazoana antoka fa ny fitaovana rehetra mamela ny fivarotany tsy mahazo alalana dia kilemaina tanteraka
Manomboka manala tariby fiarovana amin'ny iPhones i Apple
Apple dia manala ireo tariby fiarovana amin'ny iPhones napetraka eo amin'ny latabatra fampirantiana ireo Apple Stores mba hankafizan'ny mpampiasa.
Mora kokoa ny fanapahana iTunes backup raha mora amin'ny iOS 10
Ny fomba mahazatra hitrandrahana ireo sakana amin'ny teny miafina dia mandaitra kokoa amin'ny iOS 10, fahavalon'ny Apple taloha izay efa nandany tsy fankasitrahana azy tamin'ny iCloud.
Ny programa Apple vaovao dia manolotra $ 200.000 ho an'izay mahita ny fahalemen'ny rindrambaiko
Apple dia nanangana programa iray izay hanomezana $ 200.000 ho an'ireo mpampiasa izay mahita fa marefo ny fiarovana amin'ny rafitra fiasan'izy ireo.
[Nohavaozina]: Ireo mpampiasa izay nampiasa ny jailbreak Pangu dia mitatitra ny fahazoan-dàlana tsy ara-dalàna amin'ny kaontiny
Ny mpampiasa sasany izay namaky ny fonjan'izy ireo tamin'ny alàlan'ny fitaovana Pangu farany dia nitatitra ny fahazoan-dàlana tsy ara-dalàna amin'ny kaontiny.
WhatsApp sy Messages dia mizara lesoka amin'ny fiarovana
Nanatsoaka hevitra ireo injenieran'ny fiarovana ny solosaina fa mizara lesoka amin'ny fiarovana ny WhatsApp sy ny Messages
Ny SMS fanamarinana dingana roa dia afaka nanisa ny andro
Isan'andro izay mandalo izany dia matoky bebe kokoa ireo fitaovan'ny finday izahay. Ao amin'izy ireo dia mitazona sary, teny miafina ary karazana fampahalalana rehetra ...
Apple rehire Jon Callas, manam-pahaizana momba ny fiarovana sy ny encryption
Ny manam-pahaizana momba ny fiarovana sy ny encryption Jon Callas dia miverina any Apple, raha ny tokony ho izy, miasa amin'ny fiarovana ny iOS sy OS X tahaka ny nataony tamin'ny dingana teo aloha.
Apple dia manala ny rindranasa izay nananana i0n1c tao amin'ny App Store
Nesorin'i Apple avy amin'ny App Store ny rindranasa System sy Security Info izay mora mamantatra malware eo amin'ny fitaovan'ny iOS anao.
Nampitandrina ny talen'ny FBI fa mbola tsy vita ny ady amin'i Apple
Vao nanomboka ny adim-panafody atao amin'i Apple, hoy ny talen'ny FBI maro hafa ny raharaham-pitsarana mitovy amin'izany.
Ireo mpampiasa IPhone dia voadinika amin'ny fomba maloto be
Raha mahazo SMS mangataka ny Apple ID anao ianao, hamafa izany hafatra izany ary aza raharahianao azy, ny hany zavatra tian'izy ireo atao dia ny misambotra ny teny miafinao mpampiasa iCloud.
Ny FBI dia nosamborina mba hamoha iPhone amin'ny Touch ID
Nahazo baiko avy amin'ny mpitsara ny FBI mba hanery ny voafonja hamoha ny iPhone-ny hiditra amin'ny data-ny, zavatra izay voararan'ny lalàna.
Nila ny FBI 1M hamoha ny iPhone an'i San Bernardino
Ny talen'ny FBI dia nanolo-kevitra androany fa mety handoa vola mitentina tapitrisa dolara izy hanalana ilay antsoina hoe iPhone 5C amin'ny fipoahana baomba ataon'ny San Bernardino.
Hitan'ny mpijirika alemanina ny fomba fitsikilovana antso avy amin'ny iPhone
Kohl, mpijirika alemanina dia nanambara ampahibemaso ny fahafahan'ny fitsikilovana antso sy SMS voaray tamina iPhone tamin'ny alàlan'ny fanararaotana ny rafitra SS7.
Tsy nahita na inona na inona tao amin'ny iPhone San Bernardino ny FBI
Taty aoriana dia niditra tao amin'ny iPhone 5c ny FBI, na izany aza, tsy nahita na inona na inona sarobidy tao anatin'ny angon-drakitra voatahiry izy ireo.
Ny fanovana ny bibikely manomboka amin'ny taona 1970 dia afaka manamboatra fitaovana misy alika aloha kokoa noho ny iOS 9.3.1
Bibikely vaovao mifandraika amin'ny taona 1970 dia afaka manamboatra fitaovana amin'ny iOS 9.3 ary mifandraika amin'ny tamba-jotra Wi-Fi teo aloha.
Ny lesoka fiarovana Siri dia mamela ny fidirana amin'ny sary sy fifandraisana tsy misy teny miafina amin'ny iPhone 6s / Plus
Misy lesoka fiarovana vaovao hita tao amin'ny Siri izay mamela ny fidirana amin'ny sary sy fifandraisana tsy mila mampiasa Touch iD na kaody.
Nilaza ny FBI fa nahavita namoha ny iPhone 5c
Farany, nahavita nanokatra ny iPhone 5c ny FBI fa niezaka mafy namoha azy, izay hampikatso ny fizotrany.
Hitan'izy ireo ny fomba iray mamela ny famoahana sary sy horonan-tsary an'ny iMessage
Tsy azo antoka ny encryption IMessage, araka ny hitan'ny ekipa iray ao amin'ny oniversite iray any Etazonia. Fantatr'i Apple ny olana.
AceDeceiver, Trojan izay miseho any Sina ary misy fiatraikany amin'ny fitaovana tsy misy jailbreak
Vaovao ratsy ho an'ireo izay nihevitra fa tsy afaka tratran'ny virus amin'ny iOS: AceDeceiver dia niseho tany Shina ary misy fiatraikany amin'ny fitaovana tsy misy jailbreak.
Fanafihana vaovao dia mamela ny fangalarana lakilen'ny encrypted avy amin'ny Android sy ny iOS taloha
Navoaka ny fanafihana vaovao izay mamela ny angona sasany hangalarina amin'ny fitaovana misy kinova iOS taloha ary, mazava ho azy, avy amin'ny fitaovana Android.
Apple dia handoa 1M ho an'ny iPhone tsy vohany ao Frantsa
Nanapa-kevitra ny minisiteran'ny Fitsarana frantsay fa handoa onitra iray tapitrisa euro amin'ny Apple isaky ny iPhone izay nolaviny tsy hosokafana.
Ny mpampanoa lalàna dia tsy mando na Apple na FBI
Ny mpisolovava dia tsy mando an'i Apple na FBI amin'ny lahateniny ho an'ny Kongresy.
Ny talen'ny FBI dia mihevitra fa hampiasa ny fanidiana izy ireo raha tianao
Ny talen'ny FBI dia mihevitra fa hampiasa ny famohana ny iPhone voarohirohy tamin'ny fanapoahana baomba tao San Bernardino ho toy ny ohatra teo alohany.
IPhone Touch ID nijirika tamina tanimanga kely
Ny sensor sensor dia ny fomba azo antoka indrindra hiarovana ny iPhone na ny iPad amin'ny fotoana rehetra, satria ...
Nanazava ny antony nanovany ny ID Apple an'ny iPhone nalaina ny FBI
Nilaza ny FBI fa na dia nahazo backup backup iCloud aza izy ireo dia mbola mila varavarana miverina hahazoana fampahalalana bebe kokoa.
Mamaly ny fangatahana FBI i Apple mba hidirana amin'ny iPhone an'ny heloka bevava amin'ny taratasy misokatra
Nangataka tamin'i Apple ny FBI mba hanome rindrambaiko hiditra amin'ny telefaona mpanao heloka bevava, saingy tsy hanamora azy ireo i Tim Cook sy ny orinasa.
Vahaolana (ho an'ny olona mahay) amin'ny olan'ny fanaovana biriky ny iPhone amin'ny daty [video]
Nisy olona vazivazy mahatsikaiky nametraka ny iPhone tamina daty iray ary nanamboatra azy ho anao? Aza matahotra, fa efa manana vahaolana ny olana.
Apple dia manamafy ny tsy fahombiazan'ny daty. Efa mitady vahaolana ianao
Ny tsy fahombiazan'ny biriky fitaovana iOS raha toa ka napetraka ny daty manokana an'ny taona 1970 dia tsy fahombiazana lehibe ary Apple dia efa miasa amin'ny famahana ny olana.
Ahoana ny fomba hisorohana ny olan'ny fanaovana biriky ny iPhone amin'ny daty [Cydia]
Omaly alina, nametraka ny tanany tamin'ny lohany i Juan namako noho ny bibikely iOS vaovao, ...
Mitandrema, ity fikafika amin'ny iOS ity dia hamela ny iPhone tsy hampiasaina toy ny biriky!
Misy bibikely vaovao mifandraika amin'ny famaritana daty izay mamela ny iPhone tsy azo ivalozana intsony, holazainay aminao ny fomba hitrangany sy ny fomba hisorohana azy.
Torohevitra hanatsarana tsara ny fiarovana ny iPhone
Manome torohevitra anao izahay mba hahafahanao manatsara tsara ny fiarovana ny kaontinao Apple sy ny fitaovanao (ary ny angona anao manokana).
Raha miditra ao amin'ny iPhone, iPad na Mac anao ity tranokala ity dia mety hatahotra ianao
Vazivazy vaovao miendrika tranokala misy html dia afaka miteraka tsy filaminana eo amin'ny fitaovanao ary mahatonga azy tsy hamaly na hamerina azy indray.
Ireo mpisambotra taloha dia miasa amin'ny fiarovana ny iOS ... amin'ny orinasa
Ny mpamaky tranomaizina sasany dia nangina nandritra ny fotoana ela, saingy izao fantatsika ny antony: miasa ho an'ny filaminan'ny iOS izy ireo izao.
Apple manavao ny taratasy fanamarinana fiarovana ho an'ny antoko fahatelo sy ny Safari
UK dia te-hanery an'i Apple hamoaka ny takelaka misy ny iOS
Ny volavolan-dalàna iray any Angletera dia mety hitarika amin'ny Apple tsy maintsy mamoaka ny encryption iOS hiara-miasa amin'ny governemanta.
Mitandrema amin'ny InstaAgent, mangalatra ny teny miafinao Instagram izy io
Ilay mpanjifa Instagram antsoina hoe InstaAgent dia hita fa nangalatra kaontin'ny mpampiasa.
Malware dia mitombo hatrany amin'ny iOS, saingy efa manana drafitra hampiatoana azy ny Apple
Tsy ny vaovao no tianay omena indrindra, fa ny olana ara-piarovana, indrindra ny malware, dia mitombo eo amin'ireo fitaovana iOS.
Mampitaha ny iPhone amin'ny tsindrona mahafaty i Etazonia
Ny mpitsara, James Orenstein, dia nahita fa mety hampitaha ny fiarovana ny iOS 8 amin'ny tsindrona mahafaty amin'ny fanamelohana ho faty amerikana.
Ny fitsarana amerikanina dia nanery an'i Apple hamongotra ireo fitaovana
Ny Departemantan'ny Fitsarana ao Apple dia mino fa tokony terena hamoha ny fitaovana iOS ny Apple.
Namaly tamin'ny Fitsarana Etazonia i Apple fa tsy azo atao ny mamoha fitaovana miasa amin'ny iOS 8 na avo kokoa.
Ny fanafihana phishing vaovao dia manandrana mangalatra ID Apple amin'ny mpampiasa
Mitandrema, ny fanafihana phishing vaovao dia manandrana mangalatra ireo karapanondrontsika Apple amin'ny alàlan'ny mailaka izay manasa antsika hanova ny taratasinay amin'ny tranonkala sandoka.
iOS 9.0.2 manamboatra ilay bibikely mamela ny fidirana amin'ny fakantsary sy ny fifandraisana amin'ny efijery hidin-trano
Anisan'ireo fanamboarana nataon'i Apple ao amin'ny iOS 9.0.2 ny iray izay mahatonga ny fakantsary sy ny fifandraisana tsy ho afaka hiditra amin'ny efijery hidin-trano intsony
Fomba vaovao hitrandrahana ny fividianana rindrambaiko no hita izay miasa na dia amin'ny iOS 9 aza
Hitan'i iMazing tsy nahy fomba iray hanaovana "hack" ny fividianana fampiharana amin'ny fampiharana sasany toa ny Angry Birds 2 izay miasa amin'ny iOS 9 aza.
IOS 9 Bypass dia mamela anao hiditra amin'ny sary sy fifandraisana amin'ny iPhone mihidy. Ahoana no hialana amin'izany
Tsy vao sambany io fa azo atao indray ny miditra amin'ny iPhone mihidy, amin'ity indray mandeha ity miaraka amin'ny iOS 9. Lazainay aminao ny fomba hialana amin'izany.
Ny lesoka fiarovana WhatsApp vaovao dia mamela anao hangalatra resaka sy fandaharam-potoana
WhatsApp dia ao anaty vaovao indray fa tsy amin'ny zava-baovao. Nahitana lesoka fiarovana izay mamela ny resaka sy ny resaka hangalarina amintsika.
XARA: izay rehetra tokony ho fantatsika
Ny lesoka hita vao tsy ela akory dia efa manana anarana: antsoina hoe XARA ary amin'ity lahatsoratra ity dia hiezaka izahay hanazava izay rehetra mifandraika amin'ilay olana
Ny lesoka amin'ny fiarovana lehibe dia misy fiatraikany amin'ny iOS sy OS X
Fahadisoam-piarovana lehibe hita fa hisy fiatraikany amin'ny iOS sy OS X ary mamela ny mpampiasa ratsy hangalatra ny teny miafin'ny lakile keychain
Ny tsy fahombiazan'ny iOS 8.3 dia mamela antsika hangalatra ny tenimiafintsika
Ny lesoka amin'ny fiarovana hita ao amin'ny iOS 8.3 dia ahafahan'ny mpampiasa manararaotra mangalatra ny teny miafintsika amin'ny alàlan'ny fisandohana an'i Apple
Ity bibikely ity dia miteraka famerenana indray rehefa mahazo hafatra iray amin'ny iPhone
Bibikely izay vao tonga ny mazava dia mahatonga ny fampiharana iMessages hianjera tsy tapaka amin'ny iPhone rehefa mahazo lahatsoratra sasany amin'ny alàlan'ny hafatra.
iOS 9 sy OS X 10.11 dia hifantoka amin'ny "kalitao" ary hanatsara ny fahombiazan'ny fitaovana taloha
Ny rafitra fiasan'ny Apple ho avy, iOS 9 sy OS X 10.11, dia hifantoka amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny rafitra amin'ny ankapobeny sy ny fanatsarana ny fiarovana.
Kirk Hammett an'i Metallica dia namoy ny iPhone niaraka tamin'ny riff 250 ary tsy nisy backup
Kirk Hammett dia namoy ny iPhone tokony ho 6 volana lasa izay ary very koa riff 250 izay notehiriziny noho ny tsy fananana nomaniny ho solon'izay
Manome torolàlana feno momba ny zavatra tsy maintsy atao izahay raha sendra niaritra fatiantoka na fangalarana iPhone.
Izy ireo dia mahavita mandingana ny kaody hidin-trano iPhone
Izy ireo dia mahavita mandingana ny kaody hidin-trano iPhone amin'ny alàlan'ny fomba mahery vaika.
Tapaka ny fiarovana ny mpampitohy ny tselatra, vaovao tsara ho an'ny jailbreak
Manitsakitsaka ny fiarovana ny mpampifandray amin'ny Lightning amin'ny iPhone sy iPad izy ireo, zavatra hanamora ny fitadiavana tombony amin'ny jailbreak iOS 8 sy iOS 9.
Zahao ny fiarovana ny kaonty Google anao ary mahazoa tahiry fanampiny 2GB ao amin'ny Drive
Zahao ny fiarovana ny kaonty Google na Gmail anao dia hahazo valisoa fanampiny 2 GB amin'ny Google Drive ianao.
XAgent, mpitsikilo iPhone izay mangalatra ny sarinao sy ny angona hafa
XAgent dia hita, rindrambaiko mpitsikilo ho an'ny iPhone sy iPad izay mangalatra sary, data ary afaka manoratra avy amin'ny mikrônon'ireo fitaovana miaraka amina iOS 7 na iOS 8 napetraka.
Veloma ny jailbreak miaraka amin'ny iOS 8.1.3
Miaraka amin'ny fanavaozana ny iOS farany (8.1.3) dia manao veloma ny jailbreak TaiG izahay sy ireo fitrandrahana hafa izay nahatonga izany.
Voasoroka ao amin'ny kaongresy mpijirika ny fiarovana ny dian-tànana
Izy ireo dia mahavita mamerina ny dian-tànana avy amin'ny sarin'ilay olona ary mandingana ny hidin-trano Touch ID
Fa maninona no azo antoka sy tsy miankina amin'ny AirDrop ny rakitra?
Ny fiasa hizarana rakitra eo anelanelan'ny solosaina sy ny iOS dia manome ny mpampiasa haavon'ny fiarovana sy tsiambaratelo sarotra hatsaraina.
Fa maninona no tsy miasa intsony ny ID ID aorian'ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhone?
Fa maninona no tsy mandeha ny ID ID aorian'ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhone na iPad ary mangataka antsika hiditra ny kaody hidy izy? Jereo hoe maninona no mitranga izany
LUNATIK dia manolotra ny tranga TAKTIK 360 sy AQUATIK ho an'ny iPhone 6
LUNATIK dia manolotra tranga iPhone miaro tena avo lenta amin'ny fanatanjahan-tena sy asa be asa, fiarovana amin'ny vovoka, rano ary rano mitete.
Life360 dia ivon'ny fampandrenesana ho an'ny fianakavianao manontolo
Fikirana manokana momba ny fiainana manokana ao amin'ny iOS 8
Amin'ny alàlan'ny iPhone 6 dia azonao atao ny mametra ny safidy sasany mamela ny fampiasana manokana ny terminal, ho azy ireo dia ho hitantsika eo amin'ny toerana fampiasa dimy.
Powerslayer, charger mahay mandeha ho an'ny HomeKit an'ny Apple
Ny Powerslayer dia mamela ny famandrihana maranitra ny fitaovanao satria mijanona ny famandrihana rehefa vita ny tsingerina, ialana ny vokany.
Fampiharana mifanentana amin'ny Touch ID tsara indrindra
Ny fanangonana ireo rindranasa izay efa manararaotra ny Touch ID, azo antoka fa misy bebe kokoa, saingy ireo no hitantsika fa tena ilaina.
Nisy manam-pahaizana momba ny fiarovana mijirika ny Touch ID amin'ny iPhone 6 saingy manome toky fa tsy risika izany
Ilay mpijirika izay nanao dian-tànana diso ary namitaka ny Touch ID an'ny iPhone 6 dia manazava fa lava be ny fizotrany ka tsy ahazoana tombony.
Ianaro ny fomba hamerenana ny tenimiafinao Apple ID ary afaka manohy miditra amin'ny App Store, iTunes, iCloud, sns.
Izay rehetra azontsika atao amin'ny Touch ID ao amin'ny iOS 8
Touch ID no anaran'ny sensor ho an'ny mari-pahaizana momba ny fanondroana an'i Apple. Andeha hojerentsika ny fanatsarana ao amin'ny iOS 8.
Ahoana ny fomba hahitana ny tompon'ny iPhone very na nangalarina
Raha miasa ny iPhone hitanao dia azonao atao ny mampihatra ny sasany amin'ireo fika hanaraka hifandray amin'ny tompony ao anatin'ny fotoana firaketana
Signal: rindranasa ahafahanao manao antso maimaimpoana misy encrypt
Ny fampiharana Signal dia misy ao amin'ny App Store izay ahafahan'ny mpampiasa manao antso voahita ho an'ny fiainana manokana sy filaminana.
Manontany ny manam-pahaizana iray mba hakatona ny varavarana ambadiky ny iOS izay manolotra ny mombamomba anay amin'ny Apple sy ny antoko fahatelo
Nangataka tamin'i Apple i Zdziarski mba hanala ny varavarana ambadiky ny rafitra iOS hisorohana ny fanapahana data manokana ataon'ny Apple sy ireo masoivohon'ny governemanta.
Ny Impervious dia tsiranoka matevina ho an'ny iPhone
Ny Impervious dia spray tsy hita maso misy fananana super hydrophobic in-1000 avo heny noho ny volo olombelona.
IOS Mail dia tsy manafina ny fametahana mailaka
Misy olana lehibe momba ny filaminana eo amin'ny iOS 7, ny rindranasan'ny Mail dia tsy mametaka fametahana mailaka araka ny naseho.
Bibikely ao amin'ny iOS 7.1 mamela anao hanafoana ny Find My iPhone
Nisy bibikely niseho tao amin'ny iOS 7.1 ahafahanao manafoana ny asan'ny Find My iPhone sy iCloud miaraka amin'izay
Ny maha-zava-dehibe ny fanavaozana ny iOS 7.0.6 sy ny iOS 6.1.6
Zava-dehibe ny fanavaozana ny iOS 7.0.6 na ny iOS 6.1.6 amin'ny anao, noho ny lesoka fiarovana lehibe miaraka amin'ny mari-pankasitrahana SLL sy TLS an'ny tranokala tambajotra.
Raha heverinao fa tsy azo voajirika ny iPhone-nao dia mieritrereta indray
Rehefa namoaka ny rindrambaiko iOS 7 ny Apple tamin'ny 2013, dia nahita lesoka 70 i Symantec. Ary na dia tsy iharan'ny fampitahorana aza ireo marefo ireo dia mazava fa lavitra tsy azo resena ny iOS.
Ny vondrona Touch ID tsirairay avy miaraka amin'ny puce A7 ho an'ny fitomboan'ny filaminana
Ny Touch ID tsirairay dia ampiarahina amin'ny ampahany miavaka amin'ny A / puce, mahatonga ny fanoloana bokotra an-trano tsy ho vita ivelan'ny Apple.
Izy ireo dia mahavita mahazo ny teny miafin'ny Wi-Fi HotSpot amin'ny fitaovana iOS
Vondron'ireo manam-pahaizana momba ny fiarovana avy amin'ny Oniversiten'i Erlangen any Alemana no nahavita naminavina ireo lakile novokarin'i iOS ho azy
Izy ireo mahita fomba iray hialana amin'ny kaody hidin-trano fameperana
Faharefoana vaovao no hita tao amin'ny iOS izay mamela ny fihoarana ny kaody fiarovana izay miaro ny menio amin'ny famerana.
Izy ireo dia mahomby amin'ny fanapahana fitaovana iOS amin'ny charger novaina
Mpikaroka telo ao amin'ny Ivon-toeram-pampianarana Teknolojia any Georgia no nahita fomba iray hamakiana iPhone ao anatin'ny iray minitra.
Misy lesoka amin'ny fiarovana hita ao amin'ny iOS 6.1
Misy lesoka fiarovana lehibe hita tao amin'ny iOS 6.1 ho an'ny iPhone izay mamela ny fihoarana ny kaody hidy ary manome fidirana amin'ny fiasan'ny rafitra.
Tranga vaovao misy malware no hita ao amin'ny App Store izay voan'ny PC
Tranga vaovao misy malware no hita ao amin'ny App Store izay voan'ny PC amin'ny alàlan'ny kankana Worm.VB-900 izay manova ny rezistra ao amin'ny Windows.
Ny iPhone dia mirakitra ny hetsika nataonao rehetra
Toa tsy mampino izany fidirana an-tsokosoko amin'ny tsiambaratelon'ny mpanjifa izany, fa ny iPhone 4, toy ny iPad 3G, ...
Tutorial: ny fomba fanovana ny teny miafin'ny SSH
Araka ny fantatrao, ny fitaovana finday Apple rehetra dia manana teny miafina mitovy amin'ny fidirana amin'ny "SSH", izay, raha ampiasainao matetika, dia ...
Manova tenimiafina SSH avy amin'ny Terminal
Betsaka ny zavatra nolazaina tato ho ato momba ny fiarovana ny iPhone amin'ny Jailbreak vita. Iray amin'ireo olana lehibe amin'ny ...
Ahoana raha lasa mafana be ny iPhone?
Tao amin'ny The iPhone Blog dia navoakan'izy ireo ity pikantsary izay toa naseho rehefa ny iPhone ...
Encrypt iPhone Backup amin'ny 3.0 amin'ny iTunes 8.1
Ankehitriny, rehefa misafidy ny fikirana fampifanarahana ny iPhone (miaraka amin'ny rindrambaiko 3.0), ao amin'ny tabilao Famintinana dia miseho ny safidy iray ...
Inona no hatao raha mangalatra ny iPhone-nao?
Izahay dia tsy hanome vahaolana anao hamerina azy io fa zavatra tena ilaina raha ...
Mitandrema: raha mankany Etazonia ianao (tsy tsaho izany!)
Ny masoivohon'i Etazonia dia manana fahefana handinika sy hitazona iPhones sy fitaovana fitehirizana hafa ...
Atsaharo ny EDGE / 3G (Firm2.0)
Amin'ny firmware vaovao, angamba amin'ny tranga sasany dia hahetsika ny EDGE na 3G raha tsy mangataka akory izahay, ary ...
Ny virus Trojan voalohany dia miseho ho an'ny iPhone
Tsy mahagaga raha efa niseho ny virus Trojan iPhone voalohany. Vaovao lojika, raha misy ao ...